Uzobahlekisa phesheya kwezilwandle
UCELESTE Ntuli uzohlekisa kwiMoney&Men eSuncoast Casino ekupheleni kwenyanga Isithombe:ESIGCINIWE
Charles Khuzwayo | January 15, 2022
UCELESTE Ntuli uzobahlekisa kwiMoney&Men eSuncoast Casino ekupheleni kwenyanga Isithombe:ESIGCINIWE
UMLINGISI ozakhele udumo kwiSibaya, uCeleste Ntuli, uyobahlekisa phesheya kwezilwandle ngenyanga ezayo. UCeleste, obedlala indawo kaSiphokazi Zungu kulo mdlalo oqedwe ngonyaka odlule, uzobe ebansinsithekisa kwiLondon Mission Valentines Edition eLeicester Square, e-United Kingdom ngoFebhuwari 6 ngo-7 ebusuku.
Ngaphambi kokuba alifulathele elakuleli, uCeleste uzoqala ahlekise umphakathi waKwaZulu-Natal kwiMoney&Men eSuncoast Casino (Barnyard Theatre), eThekwini ekupheleni kukaJanuwari. Uthe lo mcimbi uzokuba izinsuku ezintathu njengoba uzoqala kusukela ngomhla ka-28, 29 nangomhla ka-30.
"Khohlwani imali yesikole nama-stationery ngoba vele lezi zingane ziyafeyila. Ngakho azingenzi-ke nawe ufeyile. Thola ithikithi ngo-R200 ku-www.barnyardtheatre.co.za." Akazogcina lapho kodwa uCeleste uzobuye abonakale kwiNetflix eshiyelana inkundla nozakwabo kwi-Only Jokes Allowed ngoFebhuwari 9.
"Sizovula unyaka ngendlela esiyazi kangcono yokuhlekisa. Ngizobe nginabanye osomahlaya abenjengoMpho Popps, Robby Collens noNina Hastie. Nangonyaka owedlule uCeleste ubematasatasa njengoba noKhisimusi awudlela eGhana kanti ubehla enyuka kuzwelonke ehlekisa abantu kuchungechunge lomcimbi wakhe iMoney&Men.